တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: သျှင်ဥတ္တမကျော် တောလား (၃)
၀သန်ဟေမ၊ ဂိမှအပြင်၊ ဒွါဒသင်ဝယ်၊ န၀င်္ဂကိုး၊ ဂုဏ်တော်ဖြိုးသား၊ တန်ခိုးဘုန်းခြောက်၊ လျှံတောက်ရောင်ခြည်၊ ဘ၀ဂ်လည်မျှ၊ ခြောက်မည်ဉာဏ၊ သမ္ဗုဒ္ဓ၏၊ ဆုံးစမမြင်၊ ကျေးဇူးအင်ကို၊ ကြည်လင်ရစ်ဝိုင်း၊ ရှိပန်လှိုင်း၍၊ ရွှေသိုင်းဝင့်ချီ၊ မိုးရင့်သီလျက်၊ မတီကေတု၊ တိုင်းဇေယျုက၊ သမုတိမှန်၊ ကေသာနှံသည်၊ ရွှေလျှံသဇင်၊ ဂမုန်းအင်လည်း၊ ဦးကင်မြင့်ဘောင်၊ ရနံ့လှောင်ခဲ့၊ သီခေါင်မြင့်စွာ၊ ဗွေအာကာဝယ်၊ ငွေတာရာခ၊ ကက္ကဋနှင့်၊ ဖုသျှနန်းယာဉ်၊ စန်းနှင့်ယှဉ်၍၊ ကဉ္စနာဖလ်၊ သူရကန်မူ၊ စံဗာဟီစွန်း၊ ရွေ့ရွေ့ယွန်းခဲ့၊ ဆန်းရာသီစ၊ မကာရ၌၊ လောကချစ်ရှင်၊ စက်မြန်းချင်လည်း၊ မင်ဣန္ဒာပေါက်၊ တိမ်တလျှောက်မှာ၊ ကြိုးခေါက်ဆန်းကြယ်၊ မကန်းနွယ်နှင့်၊ ဘယ်ရာသီကျန်၊ မဆန်ရွံ့ကြောက်၊ အထုံလှောက်၍၊ ငုံပေါက်လဲလှိုင်၊ လေဆိုင်ညှာညွန့်၊ ကွန့်စံသည့်နည်း၊ ငြိမ့်ငြိမ့်ဖြည်းလျက်၊ ရေကြည်းမျှညီ၊ ယင်ပေါင်ချီသည်။ သိသီရစက်၊ လများထက်၌၊ နေစက်ဗိမာန်၊ တိမ်ယာဉ်ပျံဝယ်၊ ထိမ်လျှံခြည်ပျောက်၊ ဆဒ္ဒန်ပေါက်မူ၊ ရောင်ခြောက်မပြုံ့၊ စွယ်ဖျားနုံ့လျက်၊ ကုံ့တြင်းသိမ်၊ န၀င်းအိမ်မှာ၊ ရွှေချိန်တာရာ၊ သံကောက်မာနှင့်၊ ရတနာစုံ၊ စန်းနိတုံလည်း၊ ဘုံဝေရမ္ဘ၊ ယုဂန်ဝက၊ ပပထွန်းလျှံ၊ တည့်မွန်းမှန်သော်၊ ရေလျှံသမုဒ်၊ ဗုဇွန်ထုပ်လည်း၊ လှိုင်းပုတ်မခံ၊ ကျောက်နန်းစံခဲ့၊ မတန်ယဉ်ဆုံး၊ အင်ဂမုန်းနှင့်၊ နန်းသုံးသဇင်၊ ကြိုင်သင်းရွှင်၍၊ မင်းလွင်လိုလို၊ စုံတခိုဝယ်၊ လေချိုဝန်းလု၊ လွမ်းရတု၌၊ ရွက်နုမငြိမ်၊ မြေနှင့်ချိန်လျက်၊ စိမ့်မြိုင်ရဂုံ၊ ကြိုင်လှိုင်ထုံသည်၊ အမုံချပ်ရပ်၊ ငုံဖူးကပ်၍၊ လှည့်ပတ်လက်တံ၊ လောင်းပန်းကျန်မူ၊ လွန်ဟန်တင့်ဆုံ၊ ပြာရီခြုံလျက်၊ မှိုင်းမှုန်ဆင်လာ၊ ခဲမုတ္တာနှင့်၊ ချိန်ရာသီခွင်၊ မိန်သဘင်မှာ၊ ငွေစင်ရထား၊ ယန္တရားသည်၊ အသွားတူညီ၊ ဖဂ္ဂုဏီနှင့်၊ ယှဉ်မှီတွဲကာ၊ ဗျိုင်းတာရာတို့၊ မြိုင်မှာမြိုင်လျောက်၊ ရွှေပိတောက်လည်း၊ ဖူးညှောက်ပွင့်ချိန်၊ သီဒါသိမ်ဝယ်၊ သောင်တိမ်ငွေဥ၊ သဲဗွေနုနှင့်၊ ၀တ်စုညွန့်ချီ၊ သရဖီမူ၊ ကြိုင်ဆီလှိုင်သတ်၊ ရေဖက်ဆွတ်တည့်၊ ချွေလွှတ်ဆောစွာ၊ သည်ချိန်ခါကို၊ သောတာပန်မည်၊ မဟာထေရ်တို့၊ မကြည်နိုင်အောင်၊ ခိုးမြူမှောင်ခဲ့၊ ဘုန်းခေါင်ပရမေ၊ သုံးလူ့ဆွေလျှင်၊ ဒေသစာရီ၊ ပြည်ကပ္ပီသို့၊ ကြွချီအာသန်၊ ချိန်ခါတန်ကို၊ တောင်ပံယှက်ငိုက်၊ မြေနှုတ်စိုက်၍၊ အလိုက်ဘာသာ၊ ဟင်္သာသောင်တင်း၊ ပိန်ညင်းဇင်ရော်၊ ငှက်တော်ကြိုးကြာ၊ သာရကာနှင့်၊ တမာကြက်တော၊ ဥသြငှက်ကျား၊ ငှက်ငနွားလည်း၊ ၀ပ်တွားဘီလုံး၊ ရွှေငုံးချိုးခါ၊ သူတို့မှာမူ၊ မြတ်စွာဘုရား၊ သုံးလူ့ဖျားကို၊ တတ်အားသမျှ၊ ဖူးကုန်ကြလျက်၊ ရှိစုံဆက်သည်။ ။ တောကြက်တောင်ပံ လ,ဖြုန်းတည်း။
From season to season all the long year thro, the thrice-three attributes of Sakyamuni retain their pristine splendour. Blest with six-fold wisdom, he is crowned with the six glories that flame and touch the skirts of the sky. The golden-breasted thazin and the gamon-in bow full joyously in Ketumadi, that land of victory. They gaily nod and bend in the welkin blue adoring the Sage to whom humanity owesaboundless debt of thanks. He who wearsacrown is wont to grace his brow with these laughing flowers that diffuse their sweets thro’ the palace air.
In the spangled sky, the crab and Phussha shed their glad gleam in the train of the musing moon. The sun veers in its course towards the outer path.
In the month of Pyatho the firmament is wrapt in fretted clouds flecked with darkful spots. The pent-up vapours must need pour forth in showers. The season is all unmeet for the Beloved to set out for the royal city.
The butea bloom bursts inathrill of scent and rustles in the breeze. Both land and water surge with waving blossoms that fire tusk of the young white elephant looks forlorn for the frosty air has quenched its six rays.
As the sun is seen in Aquarius, Libra and Maga dart their mellow beams. Bright with the gay medley of silver and gold and gems, the moon moves slow from Yugan’s brow. At dead of night, she shines full and the seas overflow their bounds and crabs hide in craggy holds for the violence of the waves.
The gamon-in and the thazin, loth to depart, bloom and scent in the air, tho’ their season is past. The air is hazy and the young leaves of the woods, toss and droop in an eddy of soft breezes. The lettan and meaner flowers are gay with blushing buds and peeping bells.
The Tabaung sky looks dismal and is dappled with pearly cloud. Petgunni and the egret shine bye the side of the silvery moon. Padauk buds and blooms cluster round the branches.
Rivers and rills seem glorious with silvery sands. The tharapi buds and sprouts and sheds its sweetness. The early fall of rain forms torrents that sweep sere leaves into larger streams. The touching mingle of mist and gloom fills even the spirits of saints with nameless longings. In this self-season, the Sage journeyed to Kapilawut - the seat of the king. Sheldrakes, thaungdins, kingfishers terns, drongoes, saruses, minas, parrots, cuckoos, storks, imperial pigeons, billons, quails, doves and partridges stretch their wings and bend their beaks to the ground and ender reverence to their kind. The forest rings with the clapping of wings.
ဒီရက်ပိုင်း စိတ်တွေထိုင်းမှိုင်းပြီး ဘာမှ လုပ်ချင်ကိုင်ချင် စိတ်မရှိဘူး ဖြစ်နေပေမဲ့ ဘလော့မှာတော့ ပို့စ်တွေ တင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျောင်းပိတ်ထားချိန်မို့ ဆက်တိုက်လိုလို တင်ဖြစ်နေတာပါ။ ရှေ့လ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရင် .... ဘလော့ကိုလဲ ပြန်ပြီး ကျောခိုင်းထားရပါဦးမယ်။ လောလောဆယ်တော့ ရှိနေဦးမှာပါ။ သျှင်ဥတ္တမကျော် တောလားကိုတော့ ပြီးအောင် တင်ပေးခဲ့ပါမယ်။ ကဗျာသင်္ဂဟ မေဒနီကတော့ ရိုက်ရတာ တော်တော်များတာမို့ ကျောင်းမဖွင့်ခင် ပြီးမယ် မထင်ပါ။ စာလုံးပေါင်း အမှားအယွင်းများနဲ့ စာလုံး အကျ အပေါက်များ ရှိခဲ့ရင် ကျမ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
၁၂၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၉
Posted by မေဓာဝီ at 12:41 PM
အိမ်မှာလဲ စာပြန်မဖတ်တဲ့ ကျောင်းသားလို ဖြစ်နေပြီ...
စကားပြေကတော့ ဆရာမခေါ်ပေးမှပဲ လိုက်ရေးတော့မယ်...
8/12/2009 7:58 PM
အမရေ စာအုပ်လေး တွေ့ပြီ။ ဆရာမောင်ခင်မင်ရဲ့ စာဆို့ဘဝ စာဆို့စေတနာ စာဆို့လက်ရာ ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ ရှင်ဥတဿတမကျော်တောလားပြသဿသနာ ဆိုပြီး ပါပါတယ်။ ဆရာကိုယ်တိုင်ကတော့ ၄၉ပိုဒ်အထိ ဖတ်ခဲ့ဖူးပါသတဲ့။ တချို့ဆရာကြီးများက အပိုဒ်ရေ ၄ဝဝအထိ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါသတဲ့။ ဒါပေမယ့် ဒီတောလားမှာ အလကဿငာဒေါသတွေ အများကြီး သင့်နေတယ်ဆိုပြီး ပုဂံဝန်ထောက်ဦးတင်တို့က ပယ်ပါတယ်တဲ့။
ကိုလူထွေးရေ .. စကားပြေကတော့ ဆရာမလဲ မသိဘူးတဲ့။ :P
စာအုပ် နာမည်အတွက် ကျေးဇူးပဲ လင်းဆက်ရေ။ မမေဖတ်ဖူးတာတော့ ၉ ပိုဒ်ပဲ။ ပိုဒ်ရေ ၄၀၀ ဆို တော်တ်ာများတာပေါ့။ ဂါထာ ၆၀ ပျို့ထက်တောင် များသေးတယ်နော်။
8/13/2009 4:16 PM